Tolotra Kred – BNI: atao hampihodina ny lalam-pihariana madinika | NewsMada
Tolotra Kred – BNI: atao hampihodina ny lalam-pihariana madinika
« Kred hafa mihitsy ! ». Io ny tolotra iray ao amin’ny BNI Madagascar natokana ho an’ny fandraharahana tena madinika sy orinasa madinika sy salantsalany. Nampahalala bebe kokoa momba ny ao amin’ny BNI ny amin’ny fanaparihana ny tolotra Kred.
Tsy mora ny fampidirana olona ao anatin’ny fandraharahana ara-dalàna, afa-miatrika ny fifaninanana, ao anatin’ny fiovan’ny tontolon’ny toekarena sy sosialy eto amin’ny firenena. Koa manampy ny rehetra amin’izany ny tolotra Kred, hampihodina ny lalam-piharian’ireo orinasa madinika amin’ny fanampiana azy ireny ara-bola.
« Any amin’ireo mpanjifa no misy anay », hoy i Zafindratsilikana Bernardin, mpitantana ny tolotra Kred. Mihaona mivantana amin’ny mpanjifa eny ifotony ny ekipa misahana izany, mampahafantatra ny tolotra sahaza azy ireo sy ny fampanantenana azy ireo hahazo valiny haingana amin’izay fangatahana atao. Ampiharana ny fomba fiasa ny teknolojian’ny fifandraisana ankehitriny, hanangonana ny fangatahana rehetra hatrany amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra farany. Miara-miasa amin’ny BNI amin’izany ny Telma amin’ny alalan’ny MVola.
Nanatrika ny fanazavana ny minisitry ny Toekarena sy ny tetibola, Randriamandrato Richard ; minisitry ny Indostria, varotra sy ny asa tanana, Rakotomalala Lantosoa, sy ireo mpiara-miombon’antoka hafa.
Maro no miandry valiny amin’ny Fihariana
Tafiditra ao anatin’izany ny fanatanterahana ny tetikasan’ny fitondram-panjakana, Fihariana, iarahana amin’ny BNI. Nandray voalohany ny tetikasa Fihariana ny faritra Vakinankaratra, ho an’ireo mpamboly sy mpiompy ombivavy beronono ao Andranomanelatra. Nanamarika ny fotoana ny fanoloran’ny filoha Rajoelina ny famatsiam-bola ho azy ireo, niaraka tamin’ireo delagasiona Kred/BNI sy ny Socolait. Marihina fa anarivony maro ny antontan-taratasy miandry valiny amin’ny fangatahana ity Fihariana ity.
“Ezahina ny hanafainganana ny asa rehetra iarahana amin‘ireo mpiara-miombon’antoka hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa, fa tsy mijanona eo ihany ny tombontsoa ho azy ireo, tahan’ny zana-bola 4 %, mora no ho ny an’ny mpifaninanana hafa”, hoy Rakotosamizanany Dolly, iray amin’ireo mpiandraikitra ny Kred ihany. Natao indrindra ity tolotra ity hanosehana ireo lalam-pihariana tsy ampy tosika manerana ny Nosy sy hamoronana asa.